Tohatra vita amin'ny hazo vita amin'ny metaly vita amin'ny tohatra Mono Stringer
1: Stringer: 200 * 150 * 6mm A3 vovoka vy mifono, sus304, sat316 satin / fitaratra farany.
2: nohamafisiny: hazo matevina 30mm, 25, vera voadio laminated 52mm, marbra mivaingana 30mm.
3: Tread Support: takelaka vy 6.0mm matevina, vovoka vy A3 mifono, sus304, sat316 satin / fitaratra farany.
4: Handrail: hazo matevina Φ50.8mm, famaranana satin / mirror an'ny sus316.
5: tohatra tohatra: fefy fitaratra milamina 12mm na voalamina miaraka amin'ny fijanonana sus304 / sus316.
Ny vidin'ny rafitra tohatra tokana ataonao dia ho faritana amin'ny haben'ny tohatra ilainao, ary koa ny safidy farany nofidinao.
Aorian'ny fankatoavana ny sarin'ny fivarotana, ny rafitray strircase stringer tokana dia lasa mamokatra ao amin'ny orinasa any Foshan, Sina. Izahay dia manana fitaovana fanamboarana hazo, vy ary fitaratra ka afaka manamboatra ny sakan'ny tohatra sy ny arofaninao rehetra izahay.
Ny ifantohan'ny fizotrantsika dia ny fanaovana ny fizotry ny fametrahana ho tsotra araka izay azo atao. Ny stringer dia tapaka amin'ny halavany ilainao. Izahay dia mamoaka ny diany izay alehan'ny bracket mihombo, ary izahay dia manamboatra lavaka mialoha ny diany amin'ny toerana tena alehan'ny paositra. Izahay koa mitsapa ny fametrahana alohan'ny fandefasana.
Raha vantany vao noforonina ny rafitry ny tohatra dia halefanay hoso-doko sy fametrahana torolàlana momba ny fametrahana an-tserasera. Ny vokatray dia mora fametrahana DIY ary ny ankamaroan'ny tsy mila welding. Ny tetik'asa farany azo vitaina afaka andro vitsivitsy.
Teo aloha: Tsy hita maso Cantilever Glass Steel Wooden Stepair mitsingevana
Manaraka: Tohatra mahitsy mitsivalana vita amin'ny vy roa
Tohatra mahitsy ankehitriny
Hazo tohatra mahitsy